Izindaba - Qaphela lezo zici lapho uthenga izixhumi zamandla
Isixhumi samandla okuthenga asikwazi ukuba ngumuntu ongasiqedela, kunezixhumanisi eziningi, kochwepheshe abaningi abangabamba iqhaza kuzo, umuntu oqonda kahle amandla ekhwalithi yesixhumi, isixhumi ukuma noma ukuwa kwento ngayinye , abanye abantu babamba intengo yesixhumi, lapho ukuxoxisana ngamanani kungafeza ukwazi kahle, abanye abantu bafuna ukwazi imininingwane yenkontileka efanele, nesisombululo sezinkinga, ngakho-ke, ngesikhathi sokuthenga izixhumi ezinkulu zamanje, isidingo asisi umuntu kodwa iqembu elikhulu, iqembu lidinga kuzo zonke izici zokuqoqwa kwethalente, ngale ndlela kuphela, Ukukhetha uphawu lokuxhuma oluhle kakhulu.
Ukufuna ukuba umthengi omuhle wesixhumi akulula kakhulu, ikakhulukazi kusixhumi esixubeke emakethe namuhla, uma ufuna kumikhiqizo eminingi yokuxhuma ukukhetha imikhiqizo eshibhile futhi emihle, kufanele athuthukise okubucayi, uma kungenjalo, kungenzeka ukuchitha isikhathi esithile, kepha awunakho ukukhetha kumkhiqizo omuhle.
Kunezibalo ezinemininingwane zabanikezeli bezixhumi abaningi emakethe. Njengoba isisho sithi, kuphela ngokuqhathanisa lapho singagwema khona ukulahlekelwa. Kuphela ngokuqhathanisa okuningiliziwe lapho singaqoqa imikhiqizo emihle kakhulu. Kulezi zinsuku, kunabahlinzeki abaningi bezixhumi emakethe yasekhaya, futhi imikhiqizo yehlukile. Vele, lapho uthenga, ukuthi ikhwalithi ingeyokuqala noma ukusebenza kwezindleko kungokokuqala. Uma ungabheki uhlu lwamanani kunekhwalithi, ukukhetha okuhle kakhulu. Kodwa-ke, ngenxa yomkhawulo wezindleko, amabhizinisi amaningi akhetha imikhiqizo enezindleko eziphansi kakhulu, okudinga umzamo omkhulu wokuqhathanisa imikhiqizo namanani ahlukahlukene. Zonke izici zokuxhumana nabahlinzeki zidinga inqubo, ngakho-ke akumele sibe ngamawala, sehlise umoya ngesikhathi senhlolokhono, futhi sithole iphuzu elifanelekile elamukelekayo kuzo zombili izinhlangothi.
Enye ingxenye ukuqondisa ikhwalithi. Ngenxa yokuthi isixhumi singumkhiqizo wohlobo lwe-oda, ikhwalithi kufanele ilandelwe eduze, futhi umenzi akenzi izinto eziwubukhazikhazi noma asike amakhona.Inqubo yonke idinga abasebenzi abaqeqeshiwe ukuhlola nokwamukela ukuvimbela inani elikhulu lemikhiqizo enesici. Ngakho-ke, yonke inqubo yokuthenga yokuxhuma amandla akuyona into elula kakhulu. Ngaphezu kwalokho, ukubaluleka kwesixhumi kudinga abasebenzi abakhethekile benkampani ukuthi babhekane nokuthengwa kwempahla.
I-NBC Electronic Technological Co., Ltd. (NBC), eyasungulwa ngo-2006, inhloso yethu yile: ukusungula isigaba somkhiqizo, ukulawula ikhwalithi yekilasi lokuqala. Sinezikhala ezahlukahlukene kwizixhumi ezisheshayo, izixhumi zezimboni, izixhumi zamandla, izixhumi zebhethri, izixhumi zokushaja, izixhumi zikagesi, isixhumi samanje esiphakeme, imikhiqizo yamandla ka-Anderson, izixhumi ze-APP, izixhumi zemodyuli, izixhumi zebhethri njalonjalo. Ngonyaka ka-2019, besike saya phesheya sayoncintisana nemakethe yamazwe omhlaba.
Uma uneminye imibono neziphakamiso mayelana nezixhumi zethu zemodyuli.Sicela ushayele abasebenzi bezinsizakalo.
Sicela ungene ngemvume ekhasini lethu https://www.houdpower.com ukwazi kabanzi mayelana nezixhumi ze-modul.
Isikhathi Iposi: Oct-17-2019